Koeman oo ammaanay ciyaartoydiisa… xilli uu sidoo kale ka hadlay isku aadkii la sameeyay ee tartanka Champions League – Gool FM
Koeman oo ammaanay ciyaartoydiisa… xilli uu sidoo kale ka hadlay isku aadkii la sameeyay ee tartanka Champions League
Dajiye October 2, 2020
(Barcelona) 02 Okt 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Ronald Koeman ayaa muujiyay inuu ku faraxsan yahay guushii ay Barca ka gaartay Celta Vigo.
Barcelona ayaa guul ka soo heshay kooxda Celta Vigo oo ay ku booqatay garoonkeeda Abanca Balaidos, kadddib markii ay kaga soo adkaatay 0-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca afaraad ee horyaalka La Liga.
Ronald Koeman ayaa ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta, wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay kooxdan, maanta waxaan ku ciyaarnay anshax badan, Kaarka casaanka ee Clement Lenglet waa go’aan aanan ka wada hadli karin, laakiin ciyaartoydu waxay sameeyeen wax walba oo loo baahnaa in la sameeyo si ay u guuleystaan”.
“Kooxdu way ka fiican tahay sida dadku maleeyeen, waan horumarinaynaa sababtoo ah waxyaabo qaar ayaa wali naga maqan, laakiin aad ayaan ugu faraxsanahay waxqabadka kooxda”.
“Tan iyo maalintii koowaad, waxaan arkay ciyaartooy gaajo weyn iyo xamaasad u qaba inay dib ugu soo laabtaan meesha ugu sarreysa”.
“Lionel Messi iyo Anso Fati aad ayey u fiicnaayeen, Messi wuxuu shaqeynayey kubad la’aan sidoo kale taasna wax badan ayey naga caawisay”.
“Pedri iyo Trincao waxay caawiyeen daafacyada in ka badan marka loo eego Ousmane Dembélé, sidaas darteed anigu kama qeyb galinin qeybta dambe ee ciyaarta”.
“Waxaan arkay ciyaartoydu inay leeyihiin dareen aargudasho, waxay shaqeeyaan wax badan, maanta waxaan u fiicneyn jir ahaan inta ay ciyaarta socotay, ciyaartoyda si aad ah ayey u tababartaan”.
Intaas kaddib Ronald Koeman ayaa wuxuu ka hadlay isku aadkii Champions League ee la sameeyay:
“Juventus iyo Barcelona waa labada koox ee ugu fiican group-kan, waan ixtiraameynaa tartameyaasha, laakiin Juventus iyo Barcelona waa labada koox oo ay tahay inay soo baxaan”.
Klopp oo si maldahan u sheegay in lagu sii dhawaanayo bixitaanka xiddig ka tirsan kooxda Liverpool
Muxuu ka yiri Javier Zanetti kulanka ay Real Madrid ku wajahayaan tartanka Champions League??